ကုမ္ပဏီသတင်းများစက်ရုံ, ပေးသွင်း - တရုတ်ကုမ္ပဏီသတင်းများထုတ်လုပ်သူများ
nonwoven ထည်ကဘာလဲ? အဘယ်မှာရှိ nonwoven ထည်၏ application ဖြစ်ပါတယ်? Jinhaocheng Nonwoven အထည်အလိပ်
18-08-06 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
Nonwoven အထည်အလိပ်လည်း directional သို့မဟုတ်ကျပန်းအမျှင်၏ဖန်ဆင်းသော Nonwoven အထည်, ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်နှင့်အချို့သောဂုဏ်သတ္တိများ၏အထည်ဟုခေါ်သည်။ non-ယက်ထည် non-အဆိပ်သင့်, ပြိုကွဲဖို့လွယ်ကူ, အစိုဓာတ်ကို-သက်သေပြ, breathable, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အလင်း, Non-မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး ...